Baolina kitra - “CHAN 2020” :: Tonga eny Carion avokoa ireo mpilalao valon’ny Fosa Juniors FC • AoRaha
Baolina kitra – “CHAN 2020” Tonga eny Carion avokoa ireo mpilalao valon’ny Fosa Juniors FC
Nanomboka nanatrika ny fana­za­rantena teny amin’ny kianja Carion ireo mpilalaon’ny Fosa Juiors valo nantsoina handrafitra ny ekipam-pirenena malagasy na ny Barea, omaly. Mpilalao sivy no nantsoina saingy mbola tsaboina i Dahery hatramin’izao. Efa naharitra herinandro kosa ny fampi­vondronana ho an’ny ekipa nasionaly manomana ny lalao miverina amin’i Namibia, amin’ny 19 oktobra any an-toerana ao anatin’ny dingana fifanintsanana amin’ny fiadiana ny tompondakan’i Afrika na ny CHAN 2020. Isan’ny nam­panontany tena an’Andriamanarivo Franklin, mpanazatra nasionaly, nandritra ny lalao ara-pirahalahiana ny alahady lasa teo, ny mbola tsy nahatongavan’ izy ireo hatramin’ny nanombohan’ny fanazarantena.
Nilaza kosa ity teknisianina ity fa “efa tonga tamin’ny fampivondronana izy ireo, omaly antoandro”.
Feno ny ekipam-pirenena malagasy amin’izao fotoana izao. Ny fanomanana ara-tsaina, hoy izy, no nanombohana ny fiarahan’ny ekipa. “Mila mahay miaraka ireo ankizy izay vao nampidirina nanomboka tamin’ny fano­manana ny lalao mandroso amin’i Namibia sy ireo izay efa teo hatramin’ny nanombohan’ny dingana fifanin­tsanana. Ilaina ny manamafy ilay fiombonana”, araka ny fanazavan’Andriamanarivo Franklin, mpanazatra ny Barea.
Mety ho ireo mpilalaon’ny Barea hiatrika ny CHAN 2020 no hifandona ara-pirahalahiana amin’i Maorisy izay mbola ao anatin’ny fanomanana hatrany raha ny nambaran-dRazafimamonjy Jocelyn, tompon’andraikitry ny sera­sera ao amin’ny Federasiona malagasin’ny baolina kitra (FMF). “Mbola tsy ofisialy anefa izany”, araka ny nambarany. Maro ireo mpilalaon’ ny ekipam-pirenena malagasy hiatrika ny dingana fifanintsanana amin’ny fiadiana ny amboaran’i Afrika (CAN) 2021 no tsy afaka miatrika izany. Nilaza anefa ny mpanazatra ny Barea hiatrika ny CHAN fa “mbola tsy nampandrenesina ny mikasika an’izany izahay fa mifantoka tanteraka amin’io lalao mi­verina amin’i Namibia io”. Hatreto aloha dia mbola tsy voafaritra ny daty hanaovana izany na amin’ny 13 na 15 oktobra 2019.
Tsipy kanetibe – Lalao eran-tany :: Hisolo tena ny Malagasy any Cambodge indray i Hasina sy Mirana